Umthelela ongemuhle nezilwanyana ezincane ezihlukahlukene umuntu echayeke ngisho emakubo. Ngemva emoyeni - ke iyithuluzi engaba lapho kahle nokuzala ezihlukahlukene namagciwane ayingozi. Ukuze yokuhlanza kanye magciwane lokungcoliswa komoya kumele ithengwe izibani germicidal lasekhaya. Ngaphambili, amadivayisi abanjalo babehamba kuphela izikhungo ezithile, kodwa namuhla abazithengisayo kwenziwa ezitolo eziningi, ukuze ukwazi ukusebenzisa kwabo emakhaya.
Omunye izinhlobo zalezi amadivaysi - izibani Ultraviolet elwa namagciwane ukuze ikhaya. Isebenza efanayo simiso insimbi Fluorescent, kodwa kuyasiza ukwakha emisebeni ohlangothini emisebe yama-UV ebangeni elithile. Ngokuphathelene izici isakhi izinhlelo amagciwane, zihlanganisa:
mercury osenyameni isibani likhipha ultraviolet iDemo;
ulwelwesi tube-like eyenziwe ekhethekile ingilazi uviol okuhambisa oku-ultraviolet.
umthamo obujwayelekile emisebeni abe nomthelela ezuzisayo phezu abantu nezinkomo, noma isitshalo. Kulokhu, ngaphansi kwethonya layo ebhubhisa amagciwane amaningi yingozi kubantu. izibani Germicidal ngoba indlu kudingeka ngokushesha ukuhlanza isikhala emoyeni kanye ebusweni nezilwanyana ezincane ezihlukahlukene.
Ezinye izinhlobo amadivaysi kumele kusetshenziswe konke ukunakekelwa. Ngokwesibonelo, germicidal UV isibani lasekhaya - liphinde imishini magciwane ukuthi disinfects emagcekeni ngosizo imisebe ultraviolet. Ngakho igobolondo wako wenziwe asebenza ngebhethri ingilazi, ngakhoke kuwo wonke ihlolwe izinhlobo lemisebe e-ozone ethile. Futhi ukuba yingozi uma ngokungazelelwe ngeke uxhumana eziphilayo ezaziwayo. Ngakho, kumelwe kube ngemva kokufaka ukucutshungulwa angabiki.
Yikuphi izibani ingasetshenziswa ekhaya?
Namuhla, abaningi izimbali onobuhle ababili - decontamination yamanzi kanye emagcekeni ejele. Iqembu lokuqala amadivayisi esetshenziswa, ngokuvamile emizini yabazalwane. Okunjalo izibani germicidal ngoba indlu ezifakiwe emanzini supply amayunithi, ngakho amanzi emva ukudlula endaweni emisebeni kususwa izinto ezihlukahlukene eziyingozi kanye amakhemikhali abaqukethwe. Ububanzi iqembu amadivayisi yesibili - magciwane kwezakhiwo. izibani enjalo ingase ibe umile neselula.
izibani Germicidal ngoba indlu kungaba ngamacebo ezahlukene. Ngakho, amadivayisi evulekile basikisela ukuthi ultraviolet uyokwendlala kulo lonke igumbi. Izibani elibiyelwe decontaminated emoyeni ngokulandelana. Lesi sici ngenxa yokuthi ukuthi idivaysi has umlandeli: emoyeni sidlula eshisayo emoyeni ku-apharathasi, lapho ngaphansi kwethonya emisebeni kususwa, bese okukhipha Abuyela endlini emuva kwezikhathi. Isixazululo yimpumelelo kakhulu ekhaya nje uhlobo idivayisi avaliwe.
Kuye indlela ukulungisa wonke amadivaysi zingahlukaniswa zibe phansi, itafula futhi ukulengiswa. Kufanele ukhethe uhlobo ngokuhambisana, iziphi izici isikhala ephilayo. Ngokuphathelene ukuphila, incike yegridi isebenza kanjani esitebeleni. Kuyacaca ukuthi uma kwenzeka ukuphazamiseka, kanye ngezinga eliphezulu nomswakama lisebenze eziyosebenza ingasaphathwa.
Ezinjengenyanga ngoba izinja kusukela imikhaza. Izici isicelo
Wamabele iphampa Medela: Abalandeli ibele Market
Indlela ukukhetha conditioner for yokugeza izitsha: amathiphu kanye nokubuyekezwa abakhiqizi
Izombusazwe kanye nezomnotho: izinhlangothi ezimbili zemali efanayo
Boxer Ukrainian Gvozdik Aleksandr
Udweba kanjani inkanyezi nombusi ngokushesha?
Real futhi okuzisholo inkokhelo: incazelo lokufanayo nomehluko